Wasiir Dubbe: Imaaraatka waxa aan uga fadhinaa in uu Raalligelin
Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe oo ka falceliyay hadalka kasoo yeeray Dowladda Isu tagga Imaaraatka Carabta ayaa sheegay in DFS aysan ka aamusi karin hadalkaas haddii kale uu muujinayo sida loo dhigay.
Cismaan ayaa sheegay in aysan jirin dal ogolaanaya in lagu farageliyo arrimaha gudahiisa gaar ahaan Doorashooyinkooda, sidaas awgeed waxa uu Xukuumadda Imaaraatka ugu baaqay in ay ka joogsato tallaabadaas.
“Warqadda kasoo baxday Wasaaradda Arrimaha Dibadda imaaraatka waa mid gef ku ah qarannimada & jiritaanka Umadda Soomaaliyeed, sidaas awgeed waa aan uga fadhinaa in ay inoo fasirto waxa ay ula jeedo” Sidaasi waxaa yiri Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya.
Wasiirka Warfaafinta XFS ayaa la waydiiyay dhowr su’aal oo inta badan ku gedaaman falcelinta Dalalka Caalamka ay ka sameeyeen iska hor imaadka dhexmaray Ciidamada Dowladda Federaalka & Ilaalada Musharixiinta, is hor istaagga dibadbaxa & arrimaha Siyaasadda.
Dubbe ayaa ku gaabsan in Raysul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu ka hadlay dhacdadaas salka ku heysa dibadbaxa Musharixiinta, waxaana uu si dadban u sheegay in aysan jirin Dowlad aqbaleysa in laga soo dhawaado Madaxtooyada ay ka arrimiyo.
Dhanka kale waxa uu soo hadal qaaday shirka uu ku dhawaaqay Hogaamiye Farmaajo in uu qabsoomo 18-ka 19-ka Febaraayo oo lasoo dhaafay, balse waxa uu tilmaamay in Dowladdu ay ka go’an tahay tanaasulka & hirgelinta Doorashooyinka lagu heshiiyay sida uu hadalka u dhigay.
“Waxa aynu qabnaa tuhun la xiriira in gacmo shisheeye nagu jiro, balse tanaasulka waynu wadeynaa, wax weliba waala arkaa, dedaalkeena, halgalnkeeda & geediga halka aynu u wadno nagama baajineyso” Ayuu yiri Wasiir Cismaan Abuukar Dubbe.
Xukuumadda Federaalka ayaa inta badan eedeynta ku qotonta qabsoomid la’aanta Doorashooyinka lagu heshiiyay 17-kii September 2020 dusha ka saarta Dowlad Goboleedyada, halka maamullada dhankooda isaga leexiya DFS.
Imaaraatka oo walaac xoogan ka muujiyay xaalada sii xumaaneysa ee Soomaaliya, ayaa dhinacyada ku booriyay in ay isxakameeyaan!
axadle 8355 posts
Thomas Tuchel wuxuu lumiyey kalsoonidii LABA
DAAWO VIDEO: Ciyaaryahanadda Everton